Farmaajo oo RW Rooble ku eedeeyay xil gudasho la’aan shirna ku baaqay | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Farmaajo oo RW Rooble ku eedeeyay xil gudasho la’aan shirna ku baaqay
Farmaajo oo RW Rooble ku eedeeyay xil gudasho la’aan shirna ku baaqay
Warsaxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu shaaciyay in Ra’iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu ka gaabiyay hirgelinta doorashooyinka, isla markaana Madaxweynaha uu ku baaqayo shir wadatashi ah oo ay isugu imaanayaan Goleyaasha Dowladda ee Heer Federaal, Dowlad Goboleed iyo Gobolka Banaadir, xilli Ra’iisul Wasaare Rooble uu kal hore shir isugu yeeray Golaha wadatashiga Qaran ee doorashooyinka.
Warsaxaafadeedka oo aad u dheer ayaa lagu sheegay in 14 bilood kadib Magacaabistii Ra’iisul Wasaare Rooble uusan waxba soo kordhin, hayeeshee uu kala dhaltaallay Guddiyada doorashada Soomaaliya, waxaana qodobada Warsaxaafadeedka kamid ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo;
Markuu dib u eegay Xeerkii Madaxweyne ee uu ku magacaabay Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble taas oo lagu faray in uu dhiso Xukuumad tayo leh oo dalka u horseedda doorasho nabdoon;
Markuu arkay heshiiskii 17kii Sebteembar 2020 ee ay wada gaareen Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir kaas oo uu Barlamaanka labadiisa Aqal ansixiyay, Madaxweynuhuna uu kusoo saaray Sharciga Lam. 30 (Law No. 30),
Markuu arkay habraacyadii hirgelinta doorashooyinka iyo xeerarkii lagu dhisay guddiyada heer Federaal, Heer Dowlad Goboleed iyo Guddiga Xallinta Khilaafaadka ee soo baxay 1-dii Oktoobar 2020;
Markuu tixraacay khudbaddii uu Madaxweynuhu ka horjeediyay Golaha Shacabka 1-dii May 2021 taas oo masuuliyadda hoggaaminta doorashooyinka uu u igmaday Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble;
Markii ay u caddaatay in 14 bilood keddib saxiixii Heshiiskii 17ka Sebteembar 2020 in aysan wali dhammeystirmin doorashooyinka dalka;
Markuu arkay inuu Wasiirka Koowaad ka gaabiyay hogaaminta iyo hirgelinta doorashooyinkii uu u xilsaaray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidii ku caddayd khudbaddii uu Madaxweynuhu ka horjeediyay Golaha Shacabka 1-dii May, 2021.
Markii ay caddaatay in Ra’iisul Wasaarahu uu ka leexday dhibbihii hirgelinta doorashada isaga oo kala dhantaalay wadajirka guddiyadii loo igmaday fulinta iyo qabashada doorashooyinka kuna xadgubay madaxbannaanidooda shaqo.
Markuu arkay in Ra’iisul Wasaaraha uu soosaarayo go’aanno kaligiis u gaar ah oo ay ka dhalanayaan caqabdo khatar ku ah geeddi socodka doorashooyinka;
Wuxuu Madaxweynuhu xeeriyay qodobadan;
1. In Ra’iisul Wasaaruha uu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hogaaminta doorasho ku dhisan Heshiiskii 17kii Sebtember 2020 iyo habraacyadii dhammeystirayay ee soo baxay 1-dii Oktobar 2020;
2. Madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la isugu yimaado shir wadatashi ah oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka kaas oo ay kasoo qeybgalayaan Goleyaasha Dowladda ee Heer Federaal, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhammeystiran oo si hufan dalka uga dhacdo.
3. Madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la dhagaysto talooyinka waxgaradka, siyaasiyiinta, iyo bulshada rayidka ah ee qaba tabashooyinka la xiriira doorashooyinka si loo helo hannaan doorasho oo ku dhammaada jawi nabdoon oo loo siman yahay.
Previous articleBody of missing Somali Imam in Columbus, Ohio found inside vehicle
Next articleMas’uul ka tirsan Maamulka degmada Deeyniile & Askar oo qarax lagu dilay
Ruushka oo ku dhawaaqay in uu tilaabo ka qaadi doono dalalka Sweden iyo Finland
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta go,aan ka gaari doona Miisaaniyadda dowladda
Madaxweyne Xassan Shiikh oo Shacabka uga Warbixiyay Xaaladiisa Caafimaad
User Xogta Wararka - June 29, 2022 0
Somali President Hassan Sheikh Mohamud tested negative for COVID-19 on Wednesday, according to his spokesman, Abdikarin Ali Kaar. "Today, the President tested negative for COVID-19,...
Landmine kills three soldiers, injuries two journalists in Hiiraan region
Hamza Barre gets confidence vote to become Somalia’s 21st prime minister
Ukrainians to quit Severodonetsk as Russian forces inch forward
Africom oo War kasoo saartay dagaalka Boosaaso
Hoggaanka Ahlusunna oo Shuruud Adag ku Xiray Dhismaha Maamulka Galmudug